ကလေးတဈယောကျ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး အစားအစာ (၁၁)မြိုး - Chit MayMay
Home Child Nutrition ကလေးတဈယောကျ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး အစားအစာ (၁၁)မြိုး
ကလေးတဈယောကျ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး အစားအစာ (၁၁)မြိုး
ကလေးတဈယောကျရဲ့ အရပျက သူတို့မိဘတှနေဲ့ တခွားဆှမြေိုးသားခငျြးတှရေဲ့ အရပျအမွငျ့ပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျနှုနျးထားအတိုငျး ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးပွီး သူတို့ရဲ့ အရပျဖှံဖွိုးမှုနှုနျးက လူပြို/အပြိုဖျောဝငျခြိနျအတှငျးမှာ သိသိသာသာ တိုးနိုငျပါတယျ။ ကွီးကောငျဝငျပွီးနောကျ ယောကျကြားလေးနဲ့ မိနျးကလေး နှဈယောကျစလုံးဟာ နှဈစဉျနှဈတိုငျးမှာ (ငါးစငျတီမီတာ) ၂လကျမစီ တိုးနိုငျခရြှေိပါတယျ။ သို့သျော နောကျပိုငျး ကလေးရဲ့ အရှယျရောကျလာတဲ့ အရပျက မြိုးဗီဇအပါအဝငျ အကွောငျးရငျးအတျောမြားမြားပျေါမှာ မူတညျနိုငျပါတယျ။ သို့သျော အာဟာရကငျးမဲ့ခွငျးက ရှိသငျ့တဲ့ အရပျအမွငျ့ကို မရရှိဘဲ ကလေးရဲ့ ကွီးထှားမှုကို နှောငျ့နှေးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အာဟာရကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားကို ထောကျပံ့ပေးခွငျးက ကလေးတှမှော ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ အရပျအမွငျ့ ရရှိစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
ကလေးတဈယောကျရဲ့ အရပျအမွငျ့ကို တိုးတတျစတေဲ့ အကောငျးဆုံးအစားအစာမြား
ပရိုတိနျး၊ ဗီတာမငျမြားနှငျ့ သတ်တုဓါတျကွှယျဝသော အစားအစာမြားက ကနျြးမာစှာ အရပျတိုးစဖေို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အရိုးနှငျ့ ကွှကျသားဖှံ့ဖွိုးမှုမှာ မရှိမဖွဈအခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျပါတယျ။ ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲမှာ ထညျ့သှငျးကြှေးရမယျ့ အစားအစာမြားကတော့ အောကျပါတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဥတှမှော အရိုးသနျမာဖို့အတှကျ ဗီတာမငျဒီနှငျ့ ကနျြးမာစှာ ကွှကျသား ကွီးထှားဖို့အတှကျ ပရိုတိနျးကဲ့သို့သော အာဟာရ အတျောမြားမြား ရှိပါတယျ။ ဥတှမှော ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးရဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားကို ကနျြးမာစဖေို့အတှကျ အိုမီဂါ ၃ဖကျတီးအကျဆဈနှငျ့ တခွားဗီတာမငျမြားလညျး ပါဝငျပါတယျ။
နို့မှာ ဗီတာမငျနှငျ့ သတ်တုဓါတျတှပေါဝငျတာကွောငျ့ အရိုးဖှံ့ဖွိုးမှုကို ထောကျပံ့ပေးပါတယျ။ (Whole milk) မလိုငျအပွညျ့ပါတဲ့ နို့မှာ (skimmed milk)မလိုငျဖယျထားတဲ့ နို့ထကျ ပိုပွီး အာဟာရရှိပါတယျ။
ကလေးရဲ့ အစားအသောကျထဲမှာ ပဲပိစပျကနပွေုလုပျတဲ့ စားသောကျကုနျမြားကို ထညျ့သှငျးပေးပါ။ ဥပမာ- ပဲပုပျ အသားတု၊ တို့ဖူးနှငျ့ ပဲနို့တို့ဖွဈပါတယျ။ ပဲပုပျမှာ တိရိစ်ဆာနျပရိုတိနျးနှငျ့ ညီမြှတဲ့ ပရိုတိနျးဓါတျ မွငျ့မားပါတယျ။ ဒါက သကျသတျလှတျသမားတှေ အတှကျ ပရိုတိနျး အရငျးအမွဈကောငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ပဲပုပျကို ပုံမှနျစားသုံးတာက အရိုးကနျြးမာရေးကို တိုးတတျစပေါတယျ။
အနီရောငျအသားမှာ သှေးအားနညျးရောဂါကို တားဆီးဖို့ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ သံဓါတျအပါအဝငျ အာဟာရဓါတျမြားနှငျ့ ပရိုတိနျးကွှယျဝပါတယျ။ သှေးအားနညျးရောဂါက အားနညျးခွငျးကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပွီး ကလေးရဲ့ ကွီးထှားမှုကို သကျရောကျမှုနိုငျပါတယျ။ သို့သျောအနီရောငျအသားမှာ ပွညျ့ဝဆီကွှယျဝတာကွောငျ့ တဈပတျမှာ ၂ရကျလောကျသာ စားသုံးပေးတာ အကောငျးဆုံးပါ။
၅။ အဆီနညျးတဲ့ အသားမြား
ငါးနှငျ့ ကွကျသားက ပွညျ့ဝဆီနညျးပွီး ပရိုတိနျးကွှယျဝသော အစားအစာတှေ ဖွဈပါတယျ။
ပဲတှမှော အဆီပါဝငျမှုနညျးပွီး ပရိုတိနျးဓါတျကွှယျဝပါတယျ။ ပဲအမြားစုမှာ ကလေးကွီးထှားဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျသော ကယျလစီယမျပမာဏကောငျးတှေ ပါဝငျပါတယျ။
အရိုးကနျြးမာရေးကို စဉျးစားတဲ့အခါ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို သငျ စဉျးစားမိမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှမှော ကနျြးမာစှာ အရိုးကွီးထှားမှု အတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ကယျလစီယမျနှငျ့ ဗီတာမငျတှေ ပါဝငျတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား? ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားက နို့နှငျ့မတညျ့တဲ့ ကလေးတှေ၊ နို့သောကျရတာ မကွိုကျတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ ကယျလစီယမျအရငျးအမွဈကောငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားမှာ အရိုးကနျြးမာရေးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျK လညျး ပါဝငျပါတယျ။
အခှံမာသီးမြားမှာ ပရိုတိနျးနှငျ့ ကယျလစီယမျ အရောအနှောတို့ ပါဝငျပါတယျ။ ကလေးရဲ့ အစားအသောကျထဲမှာ အခှံမာသီးတှေ ထညျ့ကြှေးဖို့ စဉျးစားနိုငျပါတယျ။ အခှံမာသီးတှမှော almond စေ့၊ pistachios နှငျ့ သဈကွားသီးတို့ဖွဈကွပါတယျ။
အစအေ့မြားစုမှာ ပရိုးတိနျးပါဝငျပွီး သတ်တုဓါတျတှတေောငျ ပါဝငျပါတယျ။ ဥပမာ- ခြီယာစမှေ့ာ ကယျလစီယမျ ပါဝငျပါတယျ။ တခွားအစမြေ့ားကို အသုတျမြားမှာ ထညျစားပေးနိုငျပါတယျ။ ကနျြးမာစှာ အရပျမွငျ့စဖေို့အတှကျ ကလေးရဲ့ အစားအသောကျထဲမှာ seed oils တှလေညျး ထညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။
အစအေ့ဆနျတှဟော ကယျလစီယမျအမြားကွီး မပါဝငျပမေယျ့ အရိုးကနျြးမာရေးကို မွှငျ့တငျခွငျးမှာ အရေးပါတဲ့ သတ်တုဓါတျနှငျ့ မဂ်ဂနီဆီယမျ အရငျးအမွဈတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ကလေးအစားအသောကျထဲမှာ အစအေ့ဆနျမြိုးစုံ ထညျ့သှငျးကြှေးပါ။ ဖိုငျဘာဓါတျ အရငျးအမွဈကောငျးတဈခုဖွဈတဲ့ နှံစားသီးနှံတှကေို စားသုံးပါ။
၁၁။ သတ်တုဓါတျကွှယျဝသော သဈသီးမြား
သဈသီးမြားက သတ်တုဓါတျနှငျ့ မဆကျစပျပမေယျ့ တခြို့သဈသီးတှမှော အရိုးကွီးထှားမှုအတှကျ လိုအပျတဲ့ တခွားသတ်တုဓါတျတှနှေငျ့ ကယျလစီယမျပမာဏတှေ လုံလုံလောကျလောကျ ပါဝငျပါတယျ။ ဥပမာ- လိမ်မျောသီး၊ ကီဝီသီး ၊ နာနတျသီးနှငျ့ တရုတျဇီးသီးတှမှော ကယျလစီယမျ ပါဝငျပါတယျ။
မမေတေို့ကလေး စားတဲ့ အစားအစာတှကေ သူတို့ရဲ့ အရပျကွီးထှားနိုငျစှမျးအပါအဝငျ သူတို့ရဲ့ ကနျြးမာရေး အစိတျအပိုငျးအတျောမြားမြားကို သိသိသာသာ လှမျးမိုးပါတယျ။ကလေးဟာ လုံလောကျတဲ့ အာဟာရနှငျ့ လုံလောကျတဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု ရရှိတဲ့အခါ ရှိသငျ့တဲ့ အရပျ၊ ကိုယျအလေးခြိနျနှငျ့အတူ ကနျြးမာတဲ့ လူကွီးတှအေဖွဈ ကွီးထှားလာပါလိမျ့မယျ။
ကလေးတစ်ယောက် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာ (၁၁)မျိုး
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရပ်က သူတို့မိဘတွေနဲ့ တခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ အရပ်အမြင့်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားအတိုင်း ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးပြီး သူတို့ရဲ့ အရပ်ဖွံဖြိုးမှုနှုန်းက လူပျို/အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းမှာ သိသိသာသာ တိုးနိုင်ပါတယ်။ ကြီးကောင်ဝင်ပြီးနောက် ယောက်ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်စလုံးဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ (ငါးစင်တီမီတာ) ၂လက်မစီ တိုးနိုင်ချေရှိပါတယ်။ သို့သော် နောက်ပိုင်း ကလေးရဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အရပ်က မျိုးဗီဇအပါအဝင် အကြောင်းရင်းအတော်များများပေါ်မှာ မူတည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အာဟာရကင်းမဲ့ခြင်းက ရှိသင့်တဲ့ အရပ်အမြင့်ကို မရရှိဘဲ ကလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းက ကလေးတွေမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရပ်အမြင့် ရရှိစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရပ်အမြင့်ကို တိုးတတ်စေတဲ့ အကောင်းဆုံးအစားအစာများ
ပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင်များနှင့် သတ္တုဓါတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများက ကျန်းမာစွာ အရပ်တိုးစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရိုးနှင့် ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲမှာ ထည့်သွင်းကျွေးရမယ့် အစားအစာများကတော့ အောက်ပါတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥတွေမှာ အရိုးသန်မာဖို့အတွက် ဗီတာမင်ဒီနှင့် ကျန်းမာစွာ ကြွက်သား ကြီးထွားဖို့အတွက် ပရိုတိန်းကဲ့သို့သော အာဟာရ အတော်များများ ရှိပါတယ်။ ဥတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အိုမီဂါ ၃ဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့် တခြားဗီတာမင်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
နို့မှာ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် အရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ (Whole milk) မလိုင်အပြည့်ပါတဲ့ နို့မှာ (skimmed milk)မလိုင်ဖယ်ထားတဲ့ နို့ထက် ပိုပြီး အာဟာရရှိပါတယ်။
ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ ပဲပိစပ်ကနေပြုလုပ်တဲ့ စားသောက်ကုန်များကို ထည့်သွင်းပေးပါ။ ဥပမာ- ပဲပုပ် အသားတု၊ တို့ဖူးနှင့် ပဲနို့တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပဲပုပ်မှာ တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းနှင့် ညီမျှတဲ့ ပရိုတိန်းဓါတ် မြင့်မားပါတယ်။ ဒါက သက်သတ်လွတ်သမားတွေ အတွက် ပရိုတိန်း အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပဲပုပ်ကို ပုံမှန်စားသုံးတာက အရိုးကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေပါတယ်။
အနီရောင်အသားမှာ သွေးအားနည်းရောဂါကို တားဆီးဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သံဓါတ်အပါအဝင် အာဟာရဓါတ်များနှင့် ပရိုတိန်းကြွယ်ဝပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါက အားနည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ကလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုကို သက်ရောက်မှုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အနီရောင်အသားမှာ ပြည့်ဝဆီကြွယ်ဝတာကြောင့် တစ်ပတ်မှာ ၂ရက်လောက်သာ စားသုံးပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
၅။ အဆီနည်းတဲ့ အသားများ
ငါးနှင့် ကြက်သားက ပြည့်ဝဆီနည်းပြီး ပရိုတိန်းကြွယ်ဝသော အစားအစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဲတွေမှာ အဆီပါဝင်မှုနည်းပြီး ပရိုတိန်းဓါတ်ကြွယ်ဝပါတယ်။ ပဲအများစုမှာ ကလေးကြီးထွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကယ်လစီယမ်ပမာဏကောင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အရိုးကျန်းမာရေးကို စဉ်းစားတဲ့အခါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို သင် စဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ကျန်းမာစွာ အရိုးကြီးထွားမှု အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လစီယမ်နှင့် ဗီတာမင်တွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ဟင်းသီးဟင်းရွက်များက နို့နှင့်မတည့်တဲ့ ကလေးတွေ၊ နို့သောက်ရတာ မကြိုက်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကယ်လစီယမ်အရင်းအမြစ်ကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်K လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အခွံမာသီးများမှာ ပရိုတိန်းနှင့် ကယ်လစီယမ် အရောအနှောတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ အခွံမာသီးတွေ ထည့်ကျွေးဖို့ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အခွံမာသီးတွေမှာ almond စေ့၊ pistachios နှင့် သစ်ကြားသီးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အစေ့အများစုမှာ ပရိုးတိန်းပါဝင်ပြီး သတ္တုဓါတ်တွေတောင် ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ချီယာစေ့မှာ ကယ်လစီယမ် ပါဝင်ပါတယ်။ တခြားအစေ့များကို အသုတ်များမှာ ထည်စားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာစွာ အရပ်မြင့်စေဖို့အတွက် ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ seed oils တွေလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အစေ့အဆန်တွေဟာ ကယ်လစီယမ်အများကြီး မပါဝင်ပေမယ့် အရိုးကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ခြင်းမှာ အရေးပါတဲ့ သတ္တုဓါတ်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကလေးအစားအသောက်ထဲမှာ အစေ့အဆန်မျိုးစုံ ထည့်သွင်းကျွေးပါ။ ဖိုင်ဘာဓါတ် အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နှံစားသီးနှံတွေကို စားသုံးပါ။
၁၁။ သတ္တုဓါတ်ကြွယ်ဝသော သစ်သီးများ
သစ်သီးများက သတ္တုဓါတ်နှင့် မဆက်စပ်ပေမယ့် တချို့သစ်သီးတွေမှာ အရိုးကြီးထွားမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ တခြားသတ္တုဓါတ်တွေနှင့် ကယ်လစီယမ်ပမာဏတွေ လုံလုံလောက်လောက် ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ- လိမ္မော်သီး၊ ကီဝီသီး ၊ နာနတ်သီးနှင့် တရုတ်ဇီးသီးတွေမှာ ကယ်လစီယမ် ပါဝင်ပါတယ်။
မေမေတို့ကလေး စားတဲ့ အစားအစာတွေက သူတို့ရဲ့ အရပ်ကြီးထွားနိုင်စွမ်းအပါအဝင် သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အစိတ်အပိုင်းအတော်များများကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးပါတယ်။ကလေးဟာ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရနှင့် လုံလောက်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ရရှိတဲ့အခါ ရှိသင့်တဲ့ အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူ ကျန်းမာတဲ့ လူကြီးတွေအဖြစ် ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။
Previous articleအတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ ကလေးဆရာဝနျတဈယောကျ ဖျောပွထားသော ကလေး မမှေးခငျမှာ ဝယျဖို့ မလိုအပျသေးတဲ့ အရာမြား
Next articleကလေးတိုငျး ဘာကွောငျ့အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှေ ပိုငျဆိုငျသငျ့လဲဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ (၅)ခကျြ